Soosaarka iyo Warshadda Shiinaha ee Dhaqanka-VNS-1308HWPB | LONGSHAN
Magaca Shayga:Gudiga Ledger White Arge
Cabir: 150 × 600mm
Miisaanka: 35KG / M2
Waxyaabaha: dabiiciga ah quartz
Midabka:Caddaan saafi ah
Alaabtaan waxaan sidoo kale ugu yeernaa guddi cad oo baraf leh, dusha sare wuxuu u eg yahay baraf, marka guddiga ka hooseeya qorraxda, waxaa ku yaal meel dhalaalaysa dusha sare, waxay umuuqataa mid aad u qurux badan. Dhamaadka wajigan kala jaban waa mid dabiici ah oo ku habboon mashaariicda naqshadeynta derbiga gudaha iyo dibedda waana doorasho aad u qurux badan oo lagu qurxiyo qolkaaga ama beertaada .Waxay leedahay saameyn ku soo noqoshada dabeecadda waana wax dhisme mooddo u ah qurxinta casriga ah. Maaddaama ay tahay waxyaabaha cagaaran ee qurxinta maxaa yeelay waxay ka kooban tahay shucaac yar oo isbarbardhigaya heerka heerka Komishanka Caalamiga ah ee Ilaalinta Raadiyaha. Badeecadan, waxaan soo saareynaa sheygan in ka badan 30 sano oo waxaan leenahay khibrad wax soo saar ku filan.
Waxaan kugula talineynaa inaad u isticmaashid sheygan darbiga gudaha ama dibedda. sida derbiga qolalka la deggan yahay, meelaha dabka lagu karsado, madbakhyada, derbiyada dhirta iyo barkadaha barkadaha
Maya MOQ, waxaan nahay warshad, waxaad dalban kartaa wax kasta oo heshiis ah baahidaada.
3. Ku saabsan warshadeenna
Warshadeena waxaa la aas aasay sanadkii 1988, waxay leedahay in ka badan 30 sano taariikh. Warshaddeenana waxaa lasiin jiray ADEO 、 KINGFISHER 、 RONA 、 OBI iyo HOMEDEPOT sanado badan.
Guud ahaan 15 maalmood ayaa dhammayn kara hal weel.
6. Waxaan ku bixin karnaa qaab "Z" 、 "S" qaab iyo toosan sidoo kale waxaan ku waafaqi karnaa dalabkaaga wax soo saar.
Xirmada caadiga ah waa 7pcs / box, 60boxes / crate, 20crates / container.Waxaan sidoo kale ku waafaqi karnaa codsigaaga xirxirida.
DHIIG LOOGU TALAGALAY, WUXUU U BAAHAN YAHAY DUMAR
PLYWOOD CRATE, WAA XANUUN BILAASH
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada, fadlan nala soo xiriir waqtigeeda, waxaan ku siin doonaa jawaab ku qancisa, ha ku qanacsanaanta macaamilku waxay ahayd hadafkeenna waxaanan sugeynaa baaritaankaaga. longshanshi@vip.126.com
Hore: Dhagaxa Dhaqanka-VNS-1308HGPB